Kuratidza zvinyorwa neelebheri mirenium lime
Muti weTatobite lime (dzimwe nguva unonzi muti weAmerican lime, iyo Mireniyamu lime lime kana muti Žižka lime) muti usingakanganwiki uri kukura pachikumbaridzo cheBohemian Paradise mumusha weTatobity mudunhu reLeberec. Lípa anomira nenzira inoenda Žernov, yakatarisana nenhamba yeimba 86.
Basic ruzivo: zita: Tatobit linden, linden in Tatobit, American linden, Millenium linden, Zizka linden: 17 m (1993), 17,5 m, 20 m (1996) kutenderera: 866 cm (1993), 940 cm (1996) zera: 500 let, 800 letanace: 1923, 60s, 1995 Coordinates: 50 ° 34'5.60 "N, 15 ° 16'28.47" E
Iyo Tatobite linden inonzi yakayambuka nepakati pakati peiyo huru-yakavezwa lime (Tilia platyphyllos) uye iyo green green (Tilia euchlora). Iri lime rakasanganiswa rakaenzana neCrimeaan lime, iyo yakasvibirira yeiyo diki-yakavezwa lime, kana mwoyo wakaomeswa (Tilia cordata) uye Caucasian lime (Tilia dasystyla kana Tilia dasystyla subsp. Caucasica).
Iro zita rekuti 'lime lime remuAmerican' ringave risina hukama nezita re botaniki Tilia americana, kana muti wemuyenga wakambozivikanwa zvisirizvo uye zita rikazovepo. Muti we lime weAmerican wakatsanangurwa uye…